Tim Cook Nweta Specialghọta Pụrụ Iche na Mahadum Glasgow | Esi m mac
Tim Cook ga-enweta nkwanye ugwu pụrụ iche na Mahadum Glasgow
Ọ bụ Javier Labrador | | Noticias
Wenesde, February 8, Tim Cook, CEO nke Apple, a ga-enye onyinye nkwanye ugwu dị elu nke sayensị site n'aka ndị Mahadum nke Glasgow. Emere nke a site na mahadum n'onwe ya site na ntọhapụ mgbasa ozi gọọmentị.
Ihe omume a ga - eme na ụlọ nzukọ Bute Hall, na kọleji nke mahadum kwuru, ọ ga - ewekwa otu elekere. O doro anya na erere tiketi nke ihe omume ahụ. Na mmemme nnyefe a ga-enwekwa okpokoro okirikiri ya na otu ụmụ akwụkwọ nwere ihu ọma ebe inwere ike iju onye isi ulo oru North America na ajujuu ufodu.
na mahadum web portal, Tim Cook toro maka ikike okike imepụta ihe na ogo ngwaahịa ya. Na mgbakwunye, ha gosipụtara mmụba o nyere na ume ọhụrụ n'ime na n'èzí Apple, na-akwalite ume dị ọcha maka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ Cupertino, ụlọ ahịa na ebe data.
Ha na-egosipụtakwa ọrụ enyemaka ya na ụwa yana Onye ndu nke ụlọ ọrụ ahụ na ahịa teknụzụ ọ na-eduzi n'oge na-adịbeghị anya.
Onyinye a nyere Cook, na-esonye n'ọtụtụ nyocha ndị ọzọ nke ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na-eme. Otu n’ime ha bụ mahadum dị ka Mahadum Auburn, Alabama, ma ọ bụ Mahadum Duke, na North Carolina.
Ọfụma ọhụrụ nye onye isi Apple CEO hụrụ n'anya n'ụwa niile. Ozo, odi nkpa inwe onye isi nke Tim Cook gha aputa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Tim Cook ga-enweta nkwanye ugwu pụrụ iche na Mahadum Glasgow
Apple weputara beta 2 nke watchOS 3.2 na tvOS 10.2 maka ndi mmepe
Otu esi ehichapụ nleta na akụkọ ihe mere eme anyị na Safari